ဗေဒင်ကဏ္ဍ Archives - CeleLove
တစ်ပတ်စာ( ၇ ) ရက် သားသမီးဟောစာတမ်း (12.9.2019 မှ 18.9.2019 အထိ)
တစ်ပတ်စာ( ၇ ) ရက် သားသမီးဟောစာတမ်း (12.9.2019 မှ 18.9.2019 အထိ) 12.9.2019 မှ 18.9.2019 အထိတစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း ” တနင်္ဂနွေ ” ဒီကာလအတွင်းမိမိဖြစ်ချင်တာတွေကိုလဲဖြစ်အောင်လုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ လဲ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်နေတတ်ပါတယ်။ မီးခဲပြာဖုံးဖြစ်နေတဲ့ မိမိအစွမ်းအစတွေထုတ်ပြခွင့်ရလာမဲ့ကာလ ပါပဲ။ အထက်လူကြီးတွေ၊ စီနီယာတွေရဲ့ […]
( ၇ ) ရက် သားသမီးအတွက် 2019 ခုနှစ် (9) လပိုင်း ဟောစာတမ်း
September 10, 2019 Cele Love 0
( ၇ ) ရက် သားသမီးအတွက် 2019 ခုနှစ် (9) လပိုင်း ဟောစာတမ်း 1.9.209 မှ 30.9.2019 ထိ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့ မမေ့နဲ့နော် …. သင်၏မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like and […]
ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့ တပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ( သြဂုတ် 28 မှ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ထိ)
ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့ တပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ( သြဂုတ် 28 မှ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ထိ) ” မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း ” သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ အထိ ကံ […]
” ဆယ့်ငါးရက်စာ မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင် ဟောစာတမ်း “
” ဆယ့်ငါးရက်စာ မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင် ဟောစာတမ်း “ မိတ်ဆွေခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ( 29 )ရက်မှ စက်တင်ဘာလ( 12 )ရက်အထိ ဝါခေါင်လကွယ်နေ့မှ တော်သလင်းလဆန်း ဆယ့်လေးရက်အထိ ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ တစ်ပါတ်စာ မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်ဟာစာတမ်း […]
” ချစ်​သူ မိမိထံအမြန်​ဆုံး ပြန်​လာရန်​ အစီအရင်​ “
August 23, 2019 Cele Love 0
” ချစ်​သူ မိမိထံအမြန်​ဆုံး ပြန်​လာရန်​ အစီအရင်​ “ ချစ်သူ က မိမိကို ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား ….?ချစ်သူက အတည်တကျ လက်ထပ်မယ်ပြောဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲ ထားသွားခြင်းကိုခံနေရပြီလား ….? အိမ်ထောင်သည် ယောင်္ကျား မယားငယ် ယူထားလို့ အိမ်ရှင်မများ စိတ်သောက ရောက်နေပြီလား ….? […]
(22.8.2019 မှ 28.8.2019 )အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း …
August 22, 2019 Cele Love 0
(22.8.2019 မှ 28.8.2019 )အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း … (1) တနင်္ဂနွေ မသွားချင်တဲ့ခရီးတွေသွားရတတ်ပါတယ်။အလုပ်ကိစ္စတွေ၊လူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့်အိမ်မကပ်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးသူတွေနဲ့ စကားများခွဲခွာရမဲ့အချိန် ပါပဲ။ ရည်မှန်းချက်တွေ မျော်လင့်ထားတာတွေ အထစ်အငေါ့ကြုံပြီးမှ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ စက်ပစ္စည်းများ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအဝင်မခံသင့်တဲ့ကာလပါပဲ။ ခရီးဝေးကိစ္စ နိုင်ငံခြားကိစ္စခဏဆိုင်းထားသင့်တဲ့ကာလပါ။လူငယ် လူရွယ်များ လူကြီးမိဘတွေနဲ့ […]
တစ်ပါတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း ( သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့အထိ)
တစ်ပါတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း ( သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့အထိ) သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ဟောစာတမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော်ဝ် …….. […]
သောကြာသားသမီးလေးတွေရဲ့ သူမတူတဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက် (၁၀) မျိုး
August 20, 2019 Cele Love 0
သောကြာသားသမီးလေးတွေရဲ့ သူမတူတဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက် (၁၀) မျိုး ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ ငါးရက်မြောက်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ ဗီးနပ်စ်ဂြိုလ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာသားသမီးလေးတွေမှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ဒီအားသာချက်တွေကိုသာ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်ရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ နော် …… […]
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၈.၈.၂၀၁၉ မှ ၂၄.၈.၂၀၁၉ ထိ)
August 18, 2019 Cele Love 0
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၈.၈.၂၀၁၉ မှ ၂၄.၈.၂၀၁၉ ထိ) ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (၂၀၁၉ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် မှ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ထိ) တနင်္ဂနွေ … […]
ပျိုမေတို့သိချင်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေရဲ့မွေးလအလိုက် ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ပျိုမေတို့ ကိုယ့်ချစ်သူဘယ်လမှာမွေးလဲဆိုတာသိရုံနဲ့ သူဖွင့်မပြောတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့၊ အကျင့်စရိုက်တွေကို သိနိုင်တယ်နော်။ ကဲ ကိုယ့်ချစ်သူမွေးလကို ရှာပြီး ကိုယ်သိချင်တဲ့ သူ့အကြောင်းလေးကို ဖတ်လိုက်ရအောင်နော် …. ။ (၁)- ဇန်နဝါရီ သင့်ချစ်သူက ဇန်နဝါရီလဖွားတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင်က ကံအရမ်းကောင်းတဲ့သူပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ […]